Services – PYAE SHIN CO.,LTD
What are Building M&E Systems?
Building M&E Systems ကို အုပ်စု သုံးမျိုး ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင် ပါတယ်။ Mechanical Systems, Electrical Systems နဲ့ Building Operation Systems တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
1. Mechanical Systems in Buildings
1.2. Plumbing and Sanitary (P&S) , Swimming Pool & Water Features,
1.3. Fire Protection (FP)
1.4. Industrial Utilities
1.5. Specialty or Auxiliary Systems
1.1. HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning: တိုက်ရိုက် ဘာသာ ပြန်မယ် ဆိုရင်တော့ အပူပေး၊ လေဝင် လေထွက် (လေသန့် လှယ်) နဲ့ လေကို ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း (လေအေးစက် တပ်ဆင် ပေးခြင်း) လို့ဆိုပါတော့။ အပူပေး စံနစ် မလိုအပ် တဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံ တွေမှာတော့ ACMV (Air Conditioning and Mechanical Ventilation) လို့ခေါ် လေ့ ရှိပါသေးတယ်။
1.2. Plumbing(ပိုက်သွယ်၊ ပိုက်ဆက် စံနစ်) မှာ
1.2.1. Water Distribution(သောက်ရေ၊ သုံးရေ ဖြန့်ဝေခြင်း)၊
1.2.2. Water Treatment(ရေသန့်စင်ခြင်း)၊
1.2.3. Sanitary Facilities(ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး အတွက် လိုအပ်တဲ့ ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းတွေ၊ ရေညစ် ထုတ်စနစ် နဲ့ ရေဆိုး (မိလ္လာ) နုတ်စံနစ်တွေ)၊ ပါဝင်ပါတယ်။
1.2.4. Town Gas Supply Systems(ချက်ပြုတ်ရန် ဓာတ်ငွေ့၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အစရှိသည်.)
1.2.5. Swimming Pool / Water Feature Filtration Systems(ရေကူးကန် နဲ့ ရေပန်းတွေက ရေတွေ ကို အချိန်ပြည့် သန့်စင်တဲ့စံနစ်တွေ) ပါဝင်ပါတယ်
1.3. Fire Protection(မီးဘေး ကာကွယ်ရေး စံနစ်) မှာ
1.3.1. Water Supply(မီးသတ်ရန် ရေ ဖြန့်ဝေခြင်း)၊
1.3.2. Automatic Sprinklers(အလိုအလျှောက် ရေဖြန်း မီးသတ်စနစ်)၊
1.3.3. Stand pipe (Wet/Dry Risers)(အထပ်အလိုက် မီးသတ်သမားသုံးရန် မီးသတ် ရေဘုံဘိုင် ခေါင်း)
1.3.4. Fire Hydrants( ခြံဝင်းအတွင်း နှင့် လမ်းဘေး တစ်လျှောက် တွေ့ရလေ့ ရှိသော အဆောက်အအုံ ပြင်ပသုံး မီးသတ် ရေဘုံဘိုင် ခေါင်းများ၊)
1.3.5. Fire Hosereels(အဆောက်အအုံ တွင်းသုံး မီးသတ် ရေပိုက်)
1.3.6. Fire and Smoke Detection(မီး၊ အပူ နဲ့ မီးခိုး တို့ကို အာရုံခံ အချက်ပေးစနစ်),
1.3.7. Gas Fire Suppression Systems( မီးသတ် ဓာတ်ငွေ့သုံးစနစ် များ၊ Pyrogen, CO2, Inergen, Halon XXX, FM-200, NN100, etc. စသည်၊)
1.3.8. Potable Fire Extinguishers(အသင့်သုံး မီးသတ်ဘူးများ၊)
1.3.9. Fireman Intercom(မီးသတ်သမား အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရန် အင်တာကွမ်း)၊
1.3.10. Public Address ( PA ) အရေးပေါ် အခြေအနေ တွင် အဆောက်အအုံ မှ စနစ်တကျ စွန့်ခွာနိုင်စေရန် ညွှန်ကြား ပေးသော စနစ်)
1.4. Industrial Utilities / Facilitiesတွေအနေနဲ့ ကတော့
1.4.1. Steam / Clean Steam Supply(ရေနွေးငွေ့) ဖြန့်ဝေပေးပို့ တဲ့ စနစ်
1.4.2. Compressed Dry Air(ဖိအားမြင့် လေ) ဖြန့်ဝေပေး တဲ့စနစ်။
1.4.3. သန့်စင်ထားတဲ့High Purity Gases: Oxygen, Nitrogen, Argon & Hydrogen အစရှိတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေ ဖြန့်ဝေ တဲ့ စနစ်တွေ။
1.4.4. Vacuum Systems (Process / House)ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း သုံး လေစုတ်စနစ် များ။
1.4.5. UPW: Ultra Pure Water / DI: DeIonized Water(အလွန်သန့်စင် သောရေ။) ထုပ်လုပ် ဖြန့်ဝေ တဲ့ စနစ်တွေ။ အမှုန်အမွှား သန့်စင်ထား သည့်အပြင် ရေထဲတွင် ပျော်ဝင်နေသော Ions များကို ထုတ်နုတ် ထားသော ကြောင့် Resistivity မြင့်မား သဖြင့် လျှပ်မကူး နိုင်သော ကြောင့် အီလက်ထရောနစ် Parts များ ဆေးကြောရန် သင့်တော်သည့် အတွက် Electronics Industry များတွင် သုံးစွဲ သည့် အပြင်၊ သန့်ရှင်းမှု ကိုလိုအပ်သော Pharmaceutical Industry များတွင် လည်း သုံးလေ့ ရှိကြသည်။
1.4.6. RO: Reverse Osmosis Systemလို့ခေါ်တဲ့ RO membrane သုံးရေသန့် စစ် စနစ်တွေ၊
1.4.7. Industrial Waste Treatmentတွေဖြစ်တဲ့ Acid/Alkaline Waste Neutralization ( စွန့်ပစ်ရေ တွင် အက်ဆစ်၊ ကော့စတစ် ဓာတ်ပြယ်စေ သောစနစ် )၊ Scrubber (လေထဲတွင်ပါဝင်သော ဓါတု အညစ်အကြေး များ သန့်စင် ပေးသောစနစ်)
1.4.8. Grey Water (စွန့်ပစ်ရေ ကိုပြန်လည် အသုံးခြတဲ့ စံနစ်တွေ) ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
2. Electrical Systems in Buildings
2.3. Lightning Protection System
2.4. Communication, Life Safety and Security Systems (or) Extra Low Voltage Systems (ELV)
2.5. Special Systems
2.1. Power ဆိုတာကတော့ ပါဝါပေါ့လေ။ အဓိက ပါဝါသုံးဘို့ လိုအပ်တဲ့နေရာ တွေကို လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ပေးပို့ရ တဲ့ စနစ်ပါ။ အသုံးအဆောင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ အတွက်ရယ်၊ စက်ပစ္စည်းတွေ အတွက်ရယ် သာမက M&E Systemsတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပါဝါ ကို လည်း ပေးရ ပါတယ်။ Normal Power Supply (ပုံမှန် စနစ်) အပြင် Standby, Essential and Emergency Power Supply Systems (အရံ နဲ့ အရေးပေါ် စနစ်တွေ) ပါပါဝင်ရပါတယ်။ အများအားဖြင့် Standby, Essential and Emergency Power Supply Systems တွေအတွက် Diesel Generator(ဒီဇယ် သုံး ဂျင်နရေတာ) ကို သုံးကြပါတယ်။ Emergency Lightings လို အရေးပေါ် လိုအပ်ချက် တွေအတွက် Diesel Generator Backup Power မရနိုင်ရင် Battery / UPS Backup ကိုသုံး နိုင်ပါတယ်။
2.2. Lighting ဆိုတာကတော့ မီးထွန်း ဘို့ပါ။ Internal Lighting (အဆောက်အအုံ အတွင်းပိုင်း ထွန်းရတဲ့မီး)၊ External Lighting (အဆောက်အအုံ အပြင်ပိုင်း ထွန်းရတဲ့မီး)၊ Emergency Lighting (အရေးပေါ် အတွက် ထွန်းရတဲ့မီး)၊ တွေ ပါဝင် ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အလင်းရောင်ရ ဘို့ သာမက အလှဆင်ဘို့ အတွက် Decorative Lighting တွေလည်း ပါဝင်ရလေ့ ရှိပါတယ်။
2.3. Lightning ဆိုတာကတော့ မိုးကြိုးလွှဲ စနစ်ပါ။ မိုးကြိုးလွှဲ စနစ် ဆိုလို့ အဆောက်အအုံ ကို လျှပ်ပြက်တာ မထိအောင် မိုးကြိူး မပစ်နိုင်အောင် လုပ်တာ မဟုတ် ပါဘူး။ မိုးကြိုးပစ်ချင် ပစ်နိုင်အောင်၊ ပစ်ချင်စရာ နေရာ သီးသန့် လုပ်ပေးထား ရတာပါ။ အဲဒီလို နေရာတွေက မှ လျှပ်စီးကြောင်းကို မြေကြီး ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားခွင့် ရအောင်လုပ်ပေး ရတာ ပါ။ ဒီစနစ် ကို လူတွေရှိ နေတဲ့နေရာ၊ ပစ္စည်းတွေ နဲ့ ခပ်ကင်းကင်း လုပ်ပေးပြီး အဆောက်အအုံ ထဲက လူတွေ၊ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းတွေ အန္တရာယ် ကင်းအောင် လုပ်ရတာပါ။ စနစ်တွေအနက်Australian (AS1768), British (BS6651), Singaporean (CP33), European (IEC) and USA (NFPA780)တွေကဆင်ဆင်တူပြီး ၊ French Systems ( ပြင်သစ် )၊ EF System တွေက တစ်မျိုး ထူးခြားပါတယ်။ ကိုယ့်စနစ် ကိုယ်အကောင်းပြော တတ်ကြသလို တစ်ဖက် နဲ့တစ်ဖက် လက်ညှိုး ထိုးကြတာတော့ ရှိတာပေါ့လေ။
2.4. ELV Systemsဆိုတာက ဗို့အားနိမ့်နိမ့်ကိုပဲ အသုံးပြုစရာ လိုတဲ့ စနစ်တွေကို ခေါ်တာပါ။ ဒီစနစ် တွေကတော့
2.4.1. Telephone / Communication / IT(တယ်လီဖုန်း၊ အီလက်ထရွန်းနစ် သတင်း အချက်အလက်)
2.4.2. Public Address, Fire Alarm (Mechanical: Fire Systemsအောက် မှာဖော်ပြထားပါတယ်)
2.4.3. MATV / CATV(တီဗီ အင်တီနာ ပင်မ၊ ကေဘယ်)
2.4.4. Security Systems( လုံခြုံရေးစနစ် များ)
2.4.5. Building Automation System (M&E Systemsများကို အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း)
2.4.6. Telephone (တယ်လီဖုန်း)၊ Audio/Video (အသံ၊ ဗီဒီယို ဆက်သွယ်ရေး)
3. Building Operation Systems(အဆောက်အအုံ လည်ပတ်ရန် လိုအပ်သောစနစ်များ )
3.1. Vertical Transportation Systems:(အပေါ်၊အောက်၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး စနစ်များ): Lifts (or) Elevators: (ဓာတ်လှေကားပါ၊ Lift က British အခေါ်ဖြစ်ပြီးElevator က American အခေါ်ဖြစ်ပါတယ်) နဲ့Escalators (စက်လှေကား) တွေ ပါဝင် ပါတယ်။ ဒီစနစ် တွေဟာ Specialists Manufacturers တွေက ထုတ်လုပ် တပ်ဆင် လေ့ရှိပါတယ်။ Project ကို လိုက်လို့ တစ်ခါတစ်ရံ Mechanical အောက်မှာရှိတတ်ပြီး များသောအားဖြင့်တော့ Electrical အောက်မှာ ထားလေ့ရှိပါတယ်.
3.2. ဒါတွေအပြင်Processing (ကုန်ထုပ် စနစ်၊ အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှု စနစ်တွေ)၊ Automation (ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းစနစ်) တွေလည်း ပါဝင်နိုင် ပါသေးတယ်။
Ceiling conduit network
Critical equipment load
Emergency Lighting, etc.
Power source (batteries, UPS, etc.)
Critical building loads, power source (batteries, UPS, etc.)
Site, landscape, building facade, security, etc.
Fire Fighting/Extinguishing Systems
Standpipe (Wet/Dry Riser)
Lake, pond, tanks
Tank Material (RC/GRP etc.)
energy (gas, diesel, or electric), etc.
Building compartmentation (by zone by floor)
Stair pressurization, etc.
Fire Annunciation (Public Address0
Automation Notification to Fire Department, etc.
Tank Location, Material (RC/FRP/GI etc.) & Sizes (capacities)
Pump Location, Purpose (Transfer / Booster), Type (Centrifugal – In-Line, Split-Case, Single/Multi-Stage) & Capacities (Flow rate & head)
Usage Points: Location, Pressure required and Demand, etc.
Hot Water Generators: Electric, Steam Powered, Heat Pump or heat exchangers
Usage Points: Locations, Pressure required and Demand, etc.
Storm, sanitary, sewage treatment (on site or in building)
Indoor Environmental Conditions အထက်မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ Temperature, RH, Acoustic Criteria, Cleanliness and Vibration Criteria တွေကို သေချာစစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ်။
System Composition and Heating / Cooling Distribution ဘယ်စနစ်တွေသုံးမှာလဲ စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ပါ။
Decentralized Systems အများစုကတော့ DX Systems: DX unit တွေပါ၊ ဒီတွေမှာ Compressors တွေပါရှိတတ်တာမို့ Unitary Systems လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ အများအားဖြင့် Air-Cooled Condensers တွေ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး အချို့ကတော့ Water-Cooled လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Cooling Only Units (လေအေးပေးစက် သက်သက်) တွေ ဖြစ်နိုင်သလို ရာသီဥတုအရလိုအပ်ရင် အပူရောအအေးပါ ပေးနိုင်တဲ့ Heat-Pumps တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်နိုင်တာတွေကတော့
Windows Units: (အသံဆူလို့ ခုခေတ်အိမ်တွေမှာ သိပ်မသုံးတော့ပါဘူး)
Split Systems (Split FCUs) တွေ
Water-Cooled လား စသည်
DCS / DHS : District Cooling / Heating System တွေ ရနိုင်လား။
Capacities and locations, etc. စွမ်းအား ကဘယ်လောက် ဆို အရွယ် က ဘယ်လောက်ရှိမယ် ဆိုတာ နဲ့ ဘယ်မှာ ထားမယ် ဆိုတာ၊ အစရှိသည်။ …
Natural Ventilationသဘာဝ အတိုင်း ရနိုင်မှာလား။
Outside air rate (minimum, 50% or 100%);ပြင်ပလေ ဘယ်နှုန်း နဲ့ ထည့်ပေးရမလဲ။
Fresh / Exhaust Air Treatments လိုအပ်ချက်တွေ။ Hazardous Exhaust တွေ ပါဝင်လာရင် တော့Treatment / Filtering / Sterilization တွေအပြင် Handling Protocol ကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစား ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ELV Systems ဆိုတာက ဗို့အားနိမ့်နိမ့်ကိုပဲ အသုံးပြုစရာလိုတဲ့စနစ်တွေကို ခေါ်တာပါ။ ဒီစနစ်တွေကတော့
Telephone / Communication / IT (တယ်လီဖုန်း၊ အီလက်ထရွန်းနစ် သတင်းအချက်အလက်)
Public Address, Fire Alarm (Mechanical: Fire Systems အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်)
MATV / CATV (တီဗီအင်တီနာပင်မ၊ ကေဘယ်)
Security Systems (လုံခြုံရေးစနစ်များ)
Building Automation System (M&E Systems များကို အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း)
Telephone (တယ်လီဖုန်း)၊ Audio/Video (အသံ၊ ဗီဒီယို ဆက်သွယ်ရေး)